Author Topic: Su'aal: Allergi Ayaan Qudaarta Qayb ka mida ku ahay? (Read 2445 times)
« on: September 10, 2015, 11:10:58 PM »
Asalamu Calaykum Wr Wb : Halkaan waxaan mahadnaq balaaran iyo salaanba ugu gudbinaa Takhaatiirteena , Waxaana leeyahay Allaah miizaamkiina ha idinkugu daro camalkaan. Caafimaad waara iyo Cimriyo cibaado dheerna Allaha idinku Arzaaqo.
-Intaa ka bacdi suaasha aan halkaan kusoo gudbinaa, waa sida tan : Takhtar waxaan in muddo ahba ama ilaa yaraantaydii qabay SANBOOR. Balse muddo hadda sanad laga joogo ayaan isku arkay, calaamado cusub , sida qudaarta qaar markaa cuno ayaan ku xajiimoonaa. Qaabka xajjiintuna waa anigoo dibnaha/faruuryaha, sanka, ilaa dhabaxanagu i cuncunaan.
Kedibna sanboorkii igu soo kacaa, qudaarta iigu darana waa BARADHADA CEERIINKA AH iyo TUFAAXA, iyo Karootada. Takhtar waan u tegay waxuuna i dhahay ISKA JIR KANA DHEEROOW WAXA AAD ALLERGIGA ku tahay.
Marka heer hadda waxaan maraa, markaa baradhada suugo ku karsanaa aan gacmaha, wax gashto, wejigana maro ku duubto.
Xitaa markaa karkeedaa i dhibaa , lkn hadday bislaato ima dhibto, qudaarta kalena waa iic aadi sida MOOSKA, iyo dhammaan qudrada kale.
Re: Su'aal: Allergi Ayaan Qudaarta Qayb ka mida ku ahay?
« Reply #1 on: September 11, 2015, 01:42:45 PM »
Marka hore waan ku faraxsanahay in aad u fiirsatay waxa ku dhibayo maxaa yeelay dadka badanaa iigu dhbaatooyinka xasaasiyada ma garanayaan waxa dhibayo waana dhib in qofka wuxuu dhibsanayo la ogaado waxay noqon kartaa wax uu cunay, wax uu labistay wax uu isku carfiyay, wax uu neefsaday, waxyaabo badan ayaa keeni karo.
Samboorka, xajiinta iyo neefta iyo cuncunka indhaha intaba waa wax allerjiga ka dhasho, dadkane way ku kala duwan yihiin waxa keneo, qofka intaba wuu isku qabi karaa, marmarka qaar wax ka mid ah, marmarka qaarne way isbadali karaan, haddii samboor aad lahaan jirtay neef way kugu dhici kartaa, haddii xajiin jirka aad lahaan jirtay indhahay way u gudbi kartaa haddii gacmaha xajiin ka qabi jirtay faruuryaha ama meelo kale oo jirka ka mid ah way u gudbi kartaa.
Intaa haddii aan ka soo gudbi, inta aad tilmaantay ee tufaaxa, baradhada iyo karootada cayriinka ah waa nooc ka mid ah allerjiga waxaana qofka bararo afka waxaana loo yaqaanaa cilladaan "birch pollen allergy" maadaama intaba ay leeyihiin waxa la yiraahdo "birch", halkaan waxaad ku arki kartaa diraasad lagu sameeyay caruurta allerjiga ku ah qudaartaan: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6846743
Allergy-gaan daaweyntiisu waa in aadka fogaatid waxa aad dhibsanayso ma jirto daawo inta lagu siiyo aad kaga fiicnaanayso xajiintaada, waxaa jiro uun daawo markii uu kugu kacsan yahay kaa dajinayso kaliya.
Sidaas awgeed waa muhiim in qofka uu ogaado waxa dhibayo si uu isaga ilaaliyo.
Haddii ay soo laalaabtaan oo allerjiga siyaado noqdo waxaa dhici karto in lagu siiyo cirbad ka hortag oo jirkaaga muddo ku jirayso laakiin qof walba waxba kama tarto cirbadaas, dadka qaar ayaa ku nafiso oo kaga nasto xajiinta.
Akhriso Sanboorka: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,5658.0.html
Akhriso Cuncunka Indhaha: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,5764.0.html
Akhriso Neefta: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,351.0.html
Akhriso Xajiinta Gacmaha: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,1091.0.html
Akhriso Allergy-ga guud: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,532.0.html
Views: 287365 June 09, 2018, 12:51:13 AM
Views: 21083 May 23, 2011, 07:44:58 PM
Views: 22291 April 10, 2016, 11:10:06 PM
Views: 14727 July 16, 2016, 02:09:51 PM
Views: 20161 October 31, 2016, 04:11:20 PM